Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): ခြိမ်းခြောက်ပြီးအုပ်ချုပ်ရင် အမျိုးယုတ်သွားလိမ့်မယ်
at 2/05/2013 10:56:00 AM
အောင်မင်းတို့ လှည့်စားသမျှ ပြည်တွင်းပြည်ပ အရည်ပျော်ကျနေတုန်း လက်ပံတောင်းက လက်ပန်းပေါင်းထခတ်ပြတော့ အောင်မင်းဟန်မဆောင်တော့ပါ ၊ တရုတ်ပြည်သာ ကျေးဇူးရှင် တရုတ်က မဟာ အင်အားကြီး စတာတွေနဲ့ခြိမ်းခြောက်ပြီး တရုတ်အောက်မှာ ၀မ်းလျားမှောက်ပေးရတော့မယ့်ပုံစံနဲ့ ဇာတ်စုံခင်းပြလာတယ်။
အောင်းမင်းကို သိအောင်တော့ပြောရမယ်။ အောင်းမင်းပြောသလောက်တရုတ်ပြည် အစိုးရက အဆင်ချင်မဲ့ လုပ်တတ်သလား။
တရုတ်က နိုင်ငံတကာမှာ စီးပွားရေးအင်အားကြီးလာတော့မှန်တယ်။ အဲဒါကြီးကို ကိုင်ပြပြီး ပြီးတရုတ်က မြန်မာပြည်က စီးပွားရေး ဆန့်ကျင်မှုတွေ လုပ်လာရင် တိုင်းရင်သားတွေကို လက်နက်ပေးပြီး အနောက်ကနေ ၀င်သိမ်းလိုက်မယ် ဆိုတာ ဟုတ်ပါ့မလား?
မြစ်ဆုံဆည်ရပ်ဆိုင်းလိုက်တဲ့ကိစ္စကတည်းက တရုတ်ကမကြေနပ်လို့ အကြောင်းရှာနေတာ မကြောက်ကြဘူးလား? စသဖြင့် ချိန်းလုံးဖြီးလုံးတွေနဲ့ အောင်မင်းအကြော ထောင်နေတာကို အခု ချိုးပြမယ်။
တရုတ်က မြန်မာပြည်မှာ ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုတွေကို ဘယ်သူတွေနဲ့ လုပ်ခဲ့တာလဲ? တရုတ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေက ဘယ်အချိန်ကနေ စပြီး လုပ်ခဲ့တာလဲ? အောင်မင်း အနေနဲ့ လိမ်စဉ် ချိန်းစဉ်ကို ချပြမယ့်အစား အမှန်ကိုပြောရမယ်။
အောင်းမင်းတို့ တရုတ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ စာချုပ်ပေါင်းများစွာတို့ထဲက ၉၉.၉၉ ရာနုံန်းဟာ စစ်အာဏာရှင် အုပ်စိုးတဲ့အချိန်မှာ လုပ်ခဲ့ကြတာ၊ တရုတ်က ကုလသမဂ္ဂမှာ အမြဲတမ်း ငါးနိုင်ငံ ကြီးငါးကြီးထဲမှာ ပါနေတော့ အောင်မင်း ဘဘ တွေက တရုတ်ကို ပြေးကပ် ဖင်လျှက်ပြပြီး တိုင်းပြည်ထဲကိုတရုတ်စီးပွားရေးတွေ အတင်းဆွဲသွင်းလာကြတာမဟုတ်လား။
အောင်မင်း အပါဝင် အောင်မင်းတို့ ဘဘ တွေ အုပ်ချုပ်တုန်းက အောင်းမင်းတို့ နေပြည်တော်မပြောနဲ့ တပြည်လုံးရဲ့ စစ်အုပ်ချုပ်မှု ပုံစံကို နိုင်ငံတကာက ကြည့်ပြီး အောင်းမင်းတို့ ဘဘကြီး အစိုးရကို ကုလသမဂ္ဂမှာ ယာယီး အစိုးရအသင်းဖွဲ့ပုံစံမျိုးလောက်ပဲ ဆိုတဲ့ (De facto Government) ဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားခဲ့ကြတာလေ။
အဲဒီအစိုးရက နဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေအများလုပ်တဲ့ တ၇ုတ်က ခုချိန်မှာ သူလုပ်ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့သိက္ခာကိုသူသိနေတယ်။ တရုတ်က သူ့အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာတောင် ဖြုတ်ထုတ်၇ှင်းတွေကို အခု လုပ်ပြနေတာကို အောင်မင်း မမြင်ဘူးလားပဲ၊ တရုတ်က အလည်ကားလုပ်ပြတာမဟုတ်ဘူး အောင်မင်းရေ။
ကမ္ဘာမှာ အင်အားကြီးလာတော့ နိုင်ငံပေါင်းစုံက တရုတ်ကို မျက်လုံးပေါင်းစုံနဲ့ ၀ိုင်းကြည့်လာကြတာကို တရုတ်က ပြုပြင်မှုတွေ လုပ်ပြလာရတယ်။ တရုတ်က အာဖရိကမှာ လက်ဝင်လျှိုပြီး အာဖရိက အာဏာရှင်အစိုးရတွေဘက်နဲ့ သူပုံပေါင်းစုံရဲဘက်ကို ဈေးကွက်တမျိုးထဲကနေ လက်နက်ခဲယမ်းတွေ နှစ်ဖက်စလုံးပေးပြီး စစ်ပွဲတွေ ကျင်းပပေးတာ ကမ္ဘာက သိလာလို့ တရုတ်စီးပွားရေးသမားတွေ တရုတ်အစိုး၇ကို ဝေဖန်ကန့်ကွက်တာတွေ ဖြစ်လာတော့ တရုတ်အစိုးရက သူ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ သူ့လုပ်ရပ်တွေအတွက် ဆင်ခြင်လာရတယ်။
ကမ္ဘာကြီးတခုလုံးမှာ တရုတ်ရဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ပမာဏငွေဟာ ရှန်ဟိုင် စီးပွားရေး အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ၂၀၁၂ မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ထရီလီယန်ပေါင်း ၈၂၀ နဲ့ လည်ပတ်နေတာ ကို ထုတ်ပြန်တယ်။
ဒါဆို အောင်မင်း လိမ်လည်ပြီး ခြိန်းခြောက်နေတာကို သိသာအောင်ပြောရရင် မြန်မာပြည်မှာ တရုတ်ရဲ့ရင်းနှီး မြုပ်နှံမှုဟာ ကမ္ဘာကြီး တခုလုံးကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားမှုရဲ့ ၁ ရာခိုင်နုံန်းတောင်မရှိပါဘူး၊ အဲလောက်ပမာနလေးပဲရှိတဲ့ မြန်မာပြည်ထဲက အကျိုးစီးပွားကို တရုတ်က အသဲအမဲဖြစ်ပြီး မြစ်ဆုံရပ်လိုက်လို့ လက်ပံတောင်းရပ်လိုက်လို့ တရုတ်က မြန်မာပြည်ကြီးကို စစ်ရေးအရ ၀င်ရောက်လာတော့မယ့် အနေထားမျိုးကို အောင်မင်းက ရောက်လေရာနေရာမှာ ပေါက်တတ်ကရ ဟိတောပဒေသာပုံပြင်လိုလုပ်ပြီး ထုတ်ထုတ်ပြောနေတယ်။